हर्षद मेहताले १९९० को दशकमा वित्तीय बजार हल्लाए। घोटाला करिब चार हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको थियो। त्सयपछि मात्र धितोपत्र बोर्डलाइ सेयर बजारमा हुने अशान्ति रोक्ने अधिकार दिइएको थियो ।
हर्षद मेहता त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले सन् १९९० को दशकमा वित्तीय बजारलाई नराम्ररी हल्लाए। त्यसपछि उनको जीवनमा किताब लेखियो र वेब सिरिज पनि बन्यो । अभिनेता अभिषेक बच्चनको फिल्म ‘द बिग बुल’ रिलिज भएपछि मानिसमा यो कथाको क्रेज बढेको हो ।
सन् १९९१ मा भारतको आर्थिक सुधार सुरु भएको थियो । १९९० देखि १९९२ सम्मको अवधि भारतीय अर्थतन्त्रको लागि ठूलो परिवर्तनको समय थियो। तर यही बीचमा एउटा घोटाला सार्वजनिक भयो जसले शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो । यस घोटालामा हर्षद मेहता जिम्मेवार थिए। घोटाला लगभग ४००० करोड रुपैयाँको थियो र त्यसपछि मात्र सेबीलाई शेयर बजारमा हेरफेर रोक्न अधिकार दिइएको थियो। घोटालाका मुख्य अभियुक्त हर्षद मेहताको सन् २००२ मा निधन भएको थियो ।
को थिए हर्षद मेहता ?
हर्षद मेहताको जन्म २९ जुलाई १९५४ मा प्यानल मोती, गुजरातको राजकोटमा भएको थियो। उनले आफ्नो बाल्यकाल मुम्बईको कांदिवलीमा बिताए। उनले होली क्रस ब्यारोन बजार माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरे। मेहताले लाजपत राई कलेजबाट बी.कॉम पढेका थिए। आठ वर्ष सानातिना काम गरे । उनको पहिलो काम न्यू इण्डिया एस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा बिक्री व्यक्तिको रूपमा थियो। त्यसपछि उनले हरिजिवनदास नेमिदास सेक्युरिटीज नामको ब्रोकरेज फर्ममा काम गरे ।
सन् १९८४ मा उनले ग्रो मोर रिसर्च एण्ड एसेट म्यानेजमेन्ट नामको आफ्नै कम्पनी खोलेर बीएसईमा ब्रोकरको रूपमा सदस्यता लिए । मेहताले बजारको हरेक चाल प्रसन्न परिज्वानदासबाट सिके। मेहतालाई ‘बिग बुल’ भनिन्थ्यो किनभने उनले सेयर बजारमा बुल रन सुरु गरेका थिए।
कसरी भयो गोलमाल ?
•सन् १९९० मा सेयर बजार उकालो लागेको थियो जसका लागि दलाल मेहतालाई जिम्मेवार ठहराएर ‘बिग बुल’को दर्जा दिइएको थियो।
•अप्रिल १९९२ मा खुलासा भएको थियो।
•मेहताले बैंकिङ नियमको फाइदा उठाएर बैंकलाई जानकारी नदिई करोडौं रुपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गर्ने गरेका थिए ।
•मेहताले बैंकबाट १५ दिनसम्म ऋण लिएर दुई बैंकबीच बिचौलिया बनाएर नाफा कमाएर बैंकलाई पैसा फिर्ता गर्ने गरेका थिए ।
•यो कुरा बाहिर आएपछि सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आउन थाल्यो ।
•मेहताले एउटा बैंकबाट नक्कली बैंक मेलमिलाप स्टेटमेन्ट (बीआर) बनाइदिने गर्थे, त्यसपछि अर्को बैंकबाट पनि सहजै पैसा लिन सक्थे । नगद पुस्तिका र पास बुक ब्यालेन्स बीचको भिन्नता मिलाउन तयार गरिएको खातालाई बैंक मेलमिलाप विवरण भनिन्छ।
•खुलासा भएपछि मेहतामाथि ७२ वटा श्रृङ्खलाबद्ध अभियोग लगाइयो र मुद्दा दायर गरियो।
कस्तो सजाय भयो र कसरी भयो उनको अन्त्य ?
•मेहता विरुद्ध धेरै मुद्दा चलिरहेका थिए तर उनी एउटा मात्रै मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए ।
•उनलाई दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
•मेहता जेलमा थुनिएका थिए ।
•डिसेम्बर ३१, २००१ मा, उनले राति अबेरसम्म दुखाइको गुनासो गरे, त्यसपछि उनलाई ठाणे सिभिल अस्पतालमा भर्ना गरियो। अस्पतालमै उनको मृत्यु भयो ।
•परिवारबाट २५ वर्ष सम्म उठाइयो पैसा
•घोटाला भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि उनको परिवारबाट रिकभरी जारी थियो । संरक्षकले मेहताको सम्पत्ति बेचेर बैंक र आयकर विभागलाई ६००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जारी गरे। २०१७ मा मेहताका परिवारका सदस्यहरूले बैंकलाई ६१४ करोड रुपैयाँ दिएका थिए।